उपाधि कस्को पोल्टामा ? पारस र शरद अामने-सामने | Sagarmatha TVSagarmatha TV उपाधि कस्को पोल्टामा ? पारस र शरद अामने-सामने | Sagarmatha TV
उपाधि कस्को पोल्टामा ? पारस र शरद अामने-सामने
पीपीएल क्रिकेटः उपाधि भिडन्त अाज
कास्की । पहिलो पटक पोखरामा आयोजना भएको पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएलको उपाधि भिडन्त मंगलबार (आज) हुँदैछ । उपाधिका लागि घरेलु टोली पोखरा पल्टन र चितवन राइनोजबीच प्रतिस्पर्धामा हुँदैछ ।
शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको पोखरा पल्टनले पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको चितवन राइनोजलाई हराउँदै उपाधि हत्याउने दाउमा देखिएको छ । पोखरा अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने चितवनले इलिमेनेटर खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको काठमाडौं रोयल्सलाई हराउँदैन फाइनलको यात्रा तय गरेको हो ।
त्यसो त पीपीएल पहिलो दिन देखि नै विशेष रहन पुग्यो । चाहे त्यो ट्रफि सार्वजनिक होस् या प्रतियोगिताकै हिसावले किन नहोस् । प्रतियोगिताको फाइनलको एक दिन अगाडि सोमबार उपाधिका लागि भिड्ने दुई टिमले ट्रफिलाई विशेष स्थान र विशेष किसिमले सार्वजनिक गरे । यो पनि विशेष नै बन्यो ।
पहिलो संस्करणको उपाधि आफ्नै शहरमा राख्रे लक्ष्यमा रहेका पोखरा पल्टनका कप्तान शरद भेषवाकरले प्रि–म्याच कन्फरेन्समा भने– ‘खेल हो, हामीले नतिजाको बारेमा ध्यान दिनु भन्दा पनि आफ्नो भूमिका गम्भीररुपमा निभायौं भने नतिजा पक्कै पनि राम्रो आउने छ ।’ उनले थप– ‘टिमको तालमेल मिलेको छ ।
त्यसलै हामी फाइनलमा पुगेका हौं । उपाधि रक्षा हाम्रो लक्ष्य हो । फाइनलमा हामी अझ सशक्त भएर मैदानमा उत्रिनेछौं र उपाधि रक्षा गर्नेछौं ।’ यता फाइनलमा पुगेको अर्को टोली चितवनका कप्तान पारस खड्काले प्रि म्याच कन्फरेन्समा भने, ‘हाम्रो टिमले राम्रो गरेर फाइनलसम्म पुग्न सकेका हौं । अघिल्ला मोमेन्टलाई पछ्याए मात्र पनि हामी सफल हुनेछौं ।’
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सबैभन्दा अनुभवि खेलाडी हुन् शरद भेषावकर र पारस खड्का । कप्तानको रुपमा एक दशकयता राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गरेका पारस खड्का रणनीतिमा माहिर खेलाडी मानिन्छन् । त्यसो त शरद पनि कम छैनन् । राष्ट्रिय टोलीमा अबसर नपाए पनि घरेलु क्रिकेटमा उनले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । घरेलु टी–२० क्रिकेटका पाँच संस्करणमध्ये पारस खड्का र शरद भेषावकरको नेतृत्वमा रहेको टोलीले एक अर्काबरुद्ध तेस्रो पटक फाइनल खेल्दैछन् । यो संयोगमात्र होइन ।
दुवै खेलाडी रणनीतिमा माहिर मानिन्छन् र अक्सनदेखि नै टिमको छनोट र विदेशी खेलाडीको अनुबन्धसम्म सोचेर निर्णय गर्छन् । लामो समयदेखि क्रिकेटमै रहेकाले उनीहरुमा घरेलु खेलाडीको क्षमताबारे पनि राम्रो ज्ञान छ । पीपीएललाई मूल्यांकन गर्ने हो भने शरदको टोली उत्कृष्ट छ । भारतीय खेलाडी रवि इन्दर सिंह र युएईका मोहम्मद नाभिदको आगमनले उनीहरु अझै सन्तुलित बनेका छन् । प्रतियोगिताको शुरुआतदेखि नै पोखराको प्रदर्शन राम्रो रहँदै आएको छ ।
मुख्य गरी विदेशी खेलाडीकै प्रदर्शनको आधारमा पोखरा लिगको शीर्ष स्थानमा रहन सफल पनि भएको हो । तर, चितवनको कथा भने ठ्याक्कै उल्टो र रोमाञ्चक छ । अक्सनपछिको टिम फर्मेसनमा पारस र करण केसीबाहेक अन्य औषत युवा खेलाडीको भरमा चितवन थियो । तर, सन्नी पटेल र स्मित पटेल आगमनले चितवन बलियो बनाएको हो । यद्यपि सरुवाती दुई खेलमा चितवनले पराजय ब्यहो¥यो । त्यसपछिका खेलमा लगातार जित हात पार्दै चितवनले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो ।
पारस भर्सेस शरदको फाइनल ‘हेड टू हेड’ विगत हेर्ने हो भने पारस अगाडि छन् । तर शरदले हिम्मत हारेका छैनन् । पीपीएलको उपाधि रक्षा गर्दै बदला लिने दाउमा उनी देखिएका छन् । धनगढी प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको फाइनलमा पारस र शरद आमने–सामने भएका थिए । पारसले धनगढी टिम चौराहाको नेतृत्व गरेका थिए भने शरद विराटनगर किङ्सको कप्तान थिए । चौराहा ६२ रनले विजयी भयो ।
त्यस्तै एभरेष्ट प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा पनि पारस र शरदकै टोली फाइनलमा पुग्यो । त्यसमा पनि पारसले बाजी नै मारे । पारसले नेतृत्व गरेको विराटनगर वारियर्सले शरदले नेतृत्व गरेको भैरहवा ग्लाडिएटर्सलाई १ रनले हराउँदै उपाधि जित्यो । घरेलु प्रतियोगिताको फाइनलमा पारस र शरदको हेड टू हेड २–० भयो । अहिले पुनः तेस्रो भेट भएको छ । यसमा शरदको शानदार प्रदर्शन रहने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा फाइनलमा पुगेर पराजय व्यहोरेका शरदका लागि पारसलाई पराजय गर्ने अर्को अवसर प्राप्त भएको छ । ‘हेड टू हेड’मा शरदले २–१ को अन्तर बनाउन रणनीति बुनिरहेका छन् ।
कात्तिक ९ देखि शुरु भएको प्रतियोगिता २० गते सम्पन्न हुँदैछ ।
६ टोली विराटनगर टाइटन्स, चितवन राइनोज, पोखरा पल्टन, बुटवल ब्लास्टर, काठमाडौं रोयल्स र एक्स्पर्ट धनगढी ब्लुजले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा पोखरा र चितवन फाइनल पुग्न सफल भएका हुन् । प्रतियोगिताको विजेताले २७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले १० लाख प्राप्त गर्नेछ ।
कप्तानले के भने ?
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान समेत रहेका पारस खड्काले भने दुबै राम्रा टोली पीपीएलको फाइनलमा पुगेको बताएका छन् । उनले भने–‘पोखरा प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको जुन खालको रेस्पोन्स पाएको छु त्यसमा एकदमै खुशी महसुस भएको छ । मैदानमा दर्शक धेरै आउनेमा आशावादी छु । यो नेपाली क्रिकेटको लागि राम्रो खबर पनि हो । नयाँ ठाउँ क्रिकेटको माध्यमबाट छुट्टै खालको पहिचान बनाउन सफल भएको ।
टोलीले एकतृत प्रदर्शन गर्दै फाइनलमा पुगेका छौं । धेरै खुशी र उत्साहित छु । आशा गरौं राम्रो क्रिकेट खेलेर सबैलाई खुशी पार्नेछौं । उनले शरदसँगै फाइनल खेल्नु संयोग हो । अरु टिम पनि राम्रा थिए । हामी पनि राम्रो गरेर नै फाइनलमा पुग्न सफल भएका हौं ।’
यता घरेलु टोली पोखरा पल्टनका कप्तान शरद भेषवाकरले आफूहरु फाइनलका लागि तयार भएको बताएका छन् । उनले घरेलु टिमबाट खेल्न पाएको कारण घरेलु दर्शकको साथ रहेको भन्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्ने दाबी गरे । उनले भने ‘जितका खेलमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्य कुराको बारेमा सोच्नु भन्दापनि आफूले काम राम्रो गर्न सके नतिजा सकरात्मक आउनेमा केन्द्रित रहनेछौं ।’ यो हाम्रो लागि अर्को एउटा खेल हो । अरुले जसरी लिएपनि हामी क्रिकेट खेल्नलाई नै यो प्रोफेसनमा आएका हौ । धेरै दवाव लिएर भन्दा पनि खेलमा रमेर फाइनल खेल्नेछौं ।
उनले भने– ‘यति ठुलो प्रतियोगिता यति राम्रो शहरमा भएको छ । राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा त यसका लागि आयोजक र यसमा आवद्ध सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । यो इभेन्टको राम्रो प्रतिक्रिया नेपालमा मात्र हैन विदेशमा पनि भएको छ । यो नेपाली क्रिकेटकै लागि पनि सुखद् र खुशीको कुरा हो ।’